Manokatra ny Varavarany Amin’Ireo Kilalao An-tsary Avy Any Ivelany Ihany i Shina Nony Farany · Global Voices teny Malagasy
Manokatra ny Varavarany Amin'Ireo Kilalao An-tsary Avy Any Ivelany Ihany i Shina Nony Farany
Voadika ny 12 Aogositra 2015 3:45 GMT
Sary natambatra avy tamin'ny sehatry ny daholobe.
Taorian'ny 15 taona, nanala ny famerany ny fivarotana ireo fitaovana filalaovana avy any ivelany ihany nony farany ny Ministeran'ny Kolontsainan'ny taniben'i Shina. Nihatra manomboka ny 12 Jolay ireo lalàna vaovao, nanome alàlana ireo orinasa eo an-toerana sy avy any ivelany tafiditra amin'ny fanamboarana sy fivarotana ireo fitaovana filalaovana. Tsy maintsy manaiky ny handray ny andraikiny ireo orinasa ireo, amin'ny fanivànana ireo votoaty voarara, izay nofaritan'ireo Shinoa tomponandraikitra.
Ao Shina, antsoina hoe “rongony elektronika” hatrizay ireo kilalao an-tsary, ary atahoran'ireo ray aman-dreny sasany sy ireo manampahaizana hoe mety hisy voka-dratsiny amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batan'ireo ankizy ny fitomboan'ny tolotra amin'izy ireny. Ny taona 2000, namoaka naoty ny Filankevi-pirenena, narahan'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy departemantam-panjakana fito hafa, namoaka didy nandràra ny fanamboarana sy fivarotana kilalao an-tsary ao amin'ny taniben'i Shina, nilaza fa “misy voka-dratsiny lehibe amin'ny tanora sy manakorontana ny rindra sosialy” io. Ito ny ampahany avy amin'ilay naoty:
Tamin'ny fandefasana ity naoty ity, tsy maintsy atsahatra ato amin'ny firenena ny fanamboarana sy ny famarotana ireo fitaovana sy pitsopitsony momba ny kilalao elektronika. Tsy misy orinasa na olona afaka miditra amin'ny fanamboarana sy famarotana ireo fitaovana sy pitsopitsony ireo. Raha tratra manitsakitsaka ireo lalàna ireo, dia hosazian'ireo ministeran'ny toekarena sy ny varotra, ny indostrian'ny fanapariaham-baovao, ary ny sampan-draharaha indostrialy sy varotra, araka ireo lalàna velona [ireo olona sy orinasa tafiditra amin'izany].
Tsy nanimba ny kolontsainan'ny lalao tao amin'ny firenena akory ireo ezak'i Shina ho fandrindrana ireo. Manoratra ao amin'ny A9VG, sehatra malaza firesadresahana momba ny kilalao, ny mpampiasa iray mizara ny ahiahiny momba ny fahombiazan'ireo ezak'i Shina handràra ireo kilalao an-tsary:
Ny tena marina, nampanahy ahy foana ireo didim-panjakana famerana ireo kilalao an-tsary hatrizay. Tato anatin'ireo taona maro, afaka mividy karazana kilalao an-tsary maro amin'ny fivarotana mijoro na amin'ny Aterineto isika, ary afaka mahita trano filalaovana kilalao an-tsary isika eny rehetra eny, ary tena ny mitady tombony aza ny ankamaroan'ireny amin'ny maha-milina filalaovana kilalao an-tsary azy. Toa mandrara ny kilalao an-tsary ny governemanta, fa mamela kosa ny fivarotana an-tsokosoko manerana ny firenena ireny kilalao ireny, izay no mahalasa saina ahy.
Ho ela velona ireo entana amidy an-tsokosoko sy hàla-tahaka
Tsy hoe nandaitra tanteraka hatrizay ilay lalàna navoaka ny taona 2000; samy hita mora foana teny amin'ireo fivarotana an-tsokosoko daholo na ny fitaovana na ireo kilalao, toy ny ao amin'ilay sehatra mpivarotra antsinjarany ao amin'ny Aterineto, Taobao, na koa ireo fivarotana kilalao an-tsary mijoro, izay hivarotan'ireo mpivarotra tsy ankihambahamba ireo entana nentina an-tsokosoko avy any Hong Kong, Japana, Korea Atsimo, ary Etazonia.
Mazava loatra fa nisy ny lafiratsin'ireo fitaovana/kilalao nentina an-tsokosoko. Mety hiakatra ny hafanan'ireo fitaovana filalaovana, misy ireo kapila tsy mety vakiana, ary maro ireo olana hafa mipoitra — izany rehetra izany, tsy nisy fanohanana ara-teknika, satria tsy manaiky ny hanome io ho an'ny fividianana tsy ara-dalàna ireo mpamokatra azy. Rehefa misy zavatra miseho toy izany, tsy afa-manoatra afa-tsy ny mividy hafa indray ireo Shinoa mpilalao.
Tena mora be ihany koa ireo kilalao hàla-tahaka. Amin'ny ankapobeny, tsy mihoatra ny 10 RMB yuan (eo amin'ny 1,60 dolara) eo ny vidin'ny entana hàla-tahaka, raha toa ka mihoatra ny in-30 avo heny amin'izay ny vidin'ny entana tena izy. Ho an'ny maro amin'ny mpilalao, tsy taka-bidy tsotra izao ny entana tsy hàla-tahaka.
Aorian'ny fividianana ny fitaovana filalaovana, mandany eo amin'ny 100 RMB yuan eo matetika ny mpilalao iray, amin'ny fividianana fitaovana manokana ahafahana “mamaky-mivantana”, izay mamela ilay fitoavana filalaovana nasiam-panovàna mba ho tafiditra amin'ilay kilalao nadika, izay afaka hita mora foana sy alaina mivantana amin'ny Aterineto ho ao anatin'ny kapila afaka entina mivezivezy ety ivelany.
Tsenan'ny kilalao an-tsary mamitak'i Shina
Tsena manintona kanefa mamitaka ihany koa hatrizay ireo isa marobe an'ny mpilalao kilalao an-tsarin'i Shina. Teo anatin'ny folo taona lasa izay, ny 28 Novambra 2003, nanambara ny fivoahan'ny kilalao PlayStation 2 tao amin'ny taniben'i Shina i Sony, kilalao izay efa nalaza be nanerana izao tontolo izao. Mba hialàna amin'ny fandraràna ataon'ny Ministeran'ny kolontsaina, nantsoin'i Sony hoe “rafitra filalaovana amin'ny informatika” ilay vokatra avy aminy raha toa ka tokony hoe “vata filalaovana kilalao an-tsary.”
Akaikin'ny 20 Desambra daty famoahana ny Playstation 2 anefa, namoaka didy vaovao indray ny Ministeran'ny kolontsaina, ary voatery nanemotra ny ezaka nataony hitondràna ilay kilalao an-tsary tao Shina i Sony.
Tamin'ny fanombohan'ny taona 2004, nanandrana ny hivarotra ny PlayStation 2 indray i Sony, nifantoka tamin'i Shanghai sy Guangzhou tamin'ity indray mitoraka ity, tamin'ny vidiny 1.988 RMB yuan (300 dolara). Manatombo eo amin'ny 25 isanjaton'ny vidiny eny amin'ny varo-maizina io vidiny io. Vokany, teo amin'ny 1.000 isa teo fotsiny no lafon'ny Sony noho ilay vidiny nanatombo sy ilay teknolojian'ny “toerana-mikatona” tsy ahafahana manao dika mitovy.
Manome fanantenana vaovao ny fisian'ny toerana ahafahana manao fifanakalozana malalaka
Efa nomanina hatry ny taona 1997, nambaran'i Shanghai ny hisian'ny Toerana ho an'ny Fifanakalozana Malalaka ho toerana fanaovana andrana ara-toekarena voalohany ao Shina ny Septambra 2013. Namoaka naoty ny governemanta Shinoa, izay mamela ireo orinasanà kilalaon-tsary avy any ivelany mamokatra sy mivarotra kilalaon-tsary, aorian'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina (mifanaraka amin'ny tondrozotran'ny fanivànana ny kilalaon-tsary).
Na dia eo aza ny hoavy manalasalan'ny tsenan'ny kilalao an-tsary ao Shina, vao nilaza vao haingana ny fiarahamiasany amin'ny BestTV ny Microsoft, orinasanà teknolojiam-baovao eo an-toerana izay rantsa-mangaikan'ny “Shanghai Media and Entertainment Group” (fantatra amin'ny hoe SMG) izay an'ny fanjakana. Nampanantena ny hitondra ny Xbox One, iray amin'ireo kilalaon-tsary malaza indrindra ankehitriny any Amerika Avaratra sy Eorôpa ho ao Shina amin'ny volana Septambra io fiaraha-miasa io. Nanao drafitra mitovy amn'io ihany koa i Sony ho an'ny PlayStation 4 sy ny PlayStation Vita, amin'ny fiarahamiasa miaraka amin'ny “Oriental Pearl Group” n'ny SMG.
Aiza ny fomba fanomezana laharana ny kilalao an-tsary?
Manolotra tondrozotra ho an'ireo orinasa mpamokatra kilalao an-tsary ny fomba fanomezana laharana ny kilalaon-tsary, izy ireo izay tsy maintsy mandahatra ny votoatin'ny kilalaony mifanaraka amin'ireo vondron-taona. Na nanatsotra ny fizotry ny fanivanana ny kilalao aza ny governemantan'i Shina hatry ny taona 2013, mbola manjavozavo sy tsy mandaitra ihany ny fanivànana ny indostria raha tsy misy rafitra tsotra handaharana azy.
Ao amin'ny sehatra A9VG firesadresahana momba ny kilalao an-tsary, mpilalao iray mino hoe mila mametraka ny fomba fanomezana laharana ny kilalao ny indostrian'ny kilalao an-tsary any Shina:
Toy ny hoe fanadinana ho an'ireo kilalao, dia tsy misy rafitra handaharana ve? Tena olana lehibe io. Ny PEGI any Eorôpa ary ESRB any Etazonia, izay napetraka mba hampiroborobo ny indostria [an'ny kilalao an-tsary], dia fikambanana mahaleo tena, tsy miankina amin'ny fanjakana. Tsy maintsy manaraka antsakany sy andavany ny [rafitra fandaharana ny kilalaon-tsary] ireo mpivarotra kilalao. Raha tsy manaraka io ianao, tsy mahazo mivarotra kilalao intsony. Noho izany, apetraky ny indostria [mpamokatra kilalaon-tsary] ihany ny ankamaroan'ireo [rafitra fandaharana ny kilalaon-tsary], fa tsy ataon'ny governemanta.
Miatrika fanamby avy amin'ireo vokatra hafa
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fidirana amin'ny Aterineto sy ny hafainganan'ny fahazoana ny angon-drakitra, nitombo be ao Shina ny kilalaon-tsary amin'ny Aterineto sy ny afaka entin-tànana, tao anatin'izay taona maro lasa izay. Araka ny tatitra ny taona 2014 momba ny indostrian'ny kilalaon-tsary any Shina, nahatratra mihoatra ny 88 lavitrisa dolara ny lanjam-bidin'ny kilalaon-tsary amin'ny Aterineto sy entin-tànana.
Niko Partners, orinasa misahana ny fikarohana, mifantoka manokana amin'ny tsenan'ny kilalaon-tsary any Azia, nilaza tao amin'ny tatitra nataony ny taona 2015 momba ny kilalaon-tsary any Shina fa nahazoana 550.000 tany Shina hatry ny taona 2015 ny fivarotana PlayStation 4 sy Xbox One fotsiny, amin'ny ampahany dia noho ny tsy fahampian'ny kilalaon-tsary Shinoa.